Ungawakopisha kanjani amafayela ku-LAN yakho nge-SSH | Kusuka kuLinux
ssh (I-Secure SHell) igama lephrothokholi esetshenziselwa ukufinyelela imishini ekude ngenethiwekhi. Ivumela lawula ngokuphelele ikhompyutha kusetshenziswa utolika womyalo. Ngaphezu kwalokho, I-SSH isivumela ukuthi sikopishe idatha ngokuphepha (ulwazi luhamba lubethelwe). Ngakho-ke, uma une-Linux kuyo yomibili imishini futhi ufuna ukukopisha idatha ngaphandle kokufaka i-SAMBA, qiniseka ukuzama le nketho. Ungayisebenzisa ngqo kusuka kuNautilus!
1 Isebenzisa i-Nautilus
2 Kusuka esigungwini
3 Isebenzisa i-SCP
1.- Faka i-opensh-server kukhompyutha esifuna ukuxhuma ngayo. Empeleni, uma sicabanga ukuthi ngesinye isikhathi sizofuna ukuxhuma kusuka kwenye ikhompyutha esiyisebenzisayo njengamanje, kungaba nengqondo ukufaka i-openssh-server emishinini emi-2 (noma ngaphezulu).
sudo apt-get ukufaka i-opensh-server
2.- Ungaqala kabusha i-compus noma usebenzise i-openssh-server.
3.- Emshinini ozolawula kuwo wonke umsebenzi, ngivule iNautilus ngacindezela u-Ctrl + L ukuze ngikwazi ukubhala kubha yekheli. Ngabhala ssh: // NROIP. Isikhathi sokuqala lapho uxhuma kuleyo khompyutha kuzovela umyalezo othi ubuqiniso bomphathi abunakwenziwa. Khetha inketho ukuze uqhubeke ngokuqhubekayo.
4.- Izocela igama lomsebenzisi nephasiwedi ofuna ukungena ngayo emshinini ofuna ukungena kuwo.
5.- Asihambe ngomkhumbi! 🙂
1.- Kukhompuyutha ozolawula kuyo yonke imisebenzi engiyibhalile:
2.- Izocela iphasiwedi yakho bese uzokwazi ukufinyelela kuwo wonke amafayela kukhompyutha ekude.
3.- Ukuphuma ngemvume cindezela u-Ctrl + D (uma uneBash) noma ubhale:
Uma kwenzeka ngemuva kokuxhuma ngempumelelo izikhathi eziningana, ngokuzumayo iyenqaba ukuxhuma. Zama ukusula uhlu lwabasingathi abaziwayo, usebenzise umyalo olandelayo kukhompyutha ofuna ukufinyelela kuyo: rm ~ / .ssh / owaziwayo_hosts.
I-SCP iyi-plugin ye-SSH esivumela ukuthi sikopishe amafayela ngokushesha nangokuphepha.
I-syntax ilula kakhulu:
Qaphela: Uma kwenzeka uthola iphutha "ssh: Ayikwazanga ukuxazulula igama lomethuleli i-earendil-desktop: Igama noma insizakalo engaziwa ukuxhumana okulahlekile", zama ukufaka esikhundleni se-server ngenombolo ye-IP yeseva. Ngibonga ama-Snocks, siyazi ukuthi kungenzeka ukwengeza umugqa, ngefomethi "Igama lomethuleli we-IP", kufayela / njll / amabamba. Isib: 192.168.1.101 earendil-desktop.
Ukukopisha ngokuhlehla, kusuka kwikhompyutha ekude kuye kweyakho, ngimane ngaguqula i-oda:
Lokho, ngokwesibonelo, uma besifuna ukuthumela okuthile kwikhompyutha ekude:
uhlu lwe-scp.txt earendil @ earendil-desktop: ~ / miscosas
Lo myalo ukopisha uhlu lwamafayela.txt kusuka kwikhompyutha engiyisebenzisayo kufolda ye- ~ / miscosas kukhompyutha yami ekude. Umnikazi waleli fayela uzoba umsebenzisi we-earendil (wekhompuyutha yami ekude).
Ukukopisha wonke amafolda, vele ungeze ipharamitha -r
Lo myalo ukopisha ifolda yezithombe, etholakala EKHAYA lekhompyutha engiyisebenzisayo, kufolda yezinganekwane, etholakala EKHAYA lekhompyutha yami ekude.
Manje, inqubo efanayo yokubuyela emuva kuzoba:
scp earendil @ earendil-desktop: ~ / izinto zami / izithombe ~
Lokhu kuzokopisha ifolda engu- ~ / mystuff / photos / folder kusuka kukhompyutha ekude iye kufolda YASEKHAYA kukhompyutha engiyisebenzisayo.
Ekugcineni, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi indlela ezenzakalelayo yifolda yakho yomsebenzisi. Uma ufuna ukukopisha okuthile ukuya noma ukusuka lapho, ungashiya indlela:
uhlu lwe-scp.txt earendil-desktop:
Kulokhu, njengoba umsebenzisi ephindaphindwa kuyo yomibili imishini, akudingekile ukuyithayipha. Futhi, ngikopisha kusuka EKHAYA kuye EKHAYA, yingakho kungadingeki ukuthayipha indlela ephelele yamafayela.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ungawakopisha kanjani amafayela ku-LAN yakho nge-SSH
UCarlos Del Rio kusho
Mngani, uyisindisile impilo yami, awazi ukuthi ngikubonga kangakanani !!
Ngiyabonga nokubonga okuyinkulungwane !!
Phendula uCarlos Del Rio
Sawubona CaMaRoN! Siyabonga ngolwazi.
Vele, yilokho okushiwo yilokhu okuthunyelwe, ukufinyelela kwenye i-pc nge-SSH. 🙂
Ukufinyelela i-iPhone nge-SSH ungenza okulandelayo: Iya ku Izindawo / Iseva bese ukhetha i-SSH, bese ugcwalisa izinkambu ezidingekayo.
Kungenzeka yini ukusebenzisa le ndlela ukufinyelela enye i-pc ene-linux?
UFeliks anadon kusho
ungabuka okuqukethwe kwenye ikhompyutha nge-ssh ngokukufaka enkombeni engenalutho.
Izokucela iphasiwedi futhi manje usungafinyelela kude_directory enkombeni yasendaweni ngemiyalo, nautilus noma nganoma yiluphi uhlelo
Phendula uFeliksi Anadon
okumangalisayo yilokho ebengikufuna ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ...
I-xd enhle kakhulu, ngendlela ngaphambi kwaleli phutha ...
Qaphela: Uma kwenzeka uthola iphutha "ssh: Ayikwazanga ukuxazulula igama lomethuleli i-earendil-desktop: Igama noma insizakalo engaziwa ukuxhumana okulahlekile", zama ukufaka esikhundleni se-server ngenombolo ye-IP yeseva.
ku / njll / Sebawoti engeza umugqa "igama le-IP"
Kuhle! Siyabonga ngemininingwane! Ngizokungeza kokuthunyelwe!
Kuhle kakhulu yize ngisanda kuthola umyalo we-rsync futhi ngiwuthande kangcono ukukopisha inani elikhulu lamafayela, ngoba uma lehluleka ungaqhubeka lapho ugcine khona.